Indlu yabantu abasi-7. Indawo entle eAmatlán.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaura Marino
Indlu yabantu abasi-7. Indawo egqibeleleyo e-Amatlán, ibanzi kakhulu, izolile kwaye iphumle ngegadi entle. Idama lokuqubha elitshiswe ngeepaneli zelanga ukuze ubushushu buphelele unyaka wonke. Amagumbi okulala amathathu abanzi, elinye lawo linegumbi lokuhlambela labucala kunye nebalcony entle ejonge ezintabeni.
Igumbi lokuhlala elipholileyo. Igumbi lokutyela elineetoni zokukhanya. Ikhitshi eliphangaleleyo. Ngaphandle nje kwekhitshi kukho ithafa elinomtsalane elinepergola ezele ziintyatyambo apho unokonwabela ukutya kwakho.
Amagumbi okulala amane abanzi, elinye lawo linegumbi lokuhlambela labucala kunye nebalcony entle ejonge ezintabeni.
Igumbi lokuhlala elipholileyo. Igumbi lokutyela elineetoni zokukhanya. Ikhitshi eliphangaleleyo. Ngaphandle nje kwekhitshi kukho ithafa elinomtsalane elinepergola ezele ziintyatyambo apho unokonwabela ukutya kwakho. Ifanelekile kwiirenti zexesha elide okanye iiholide zempelaveki unyaka wonke.
4.71 out of 5 stars from 89 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-89
I-Amatlan de Quetzalcoatl yidolophu encinci apho iindawo ze-archaeological zeminyaka engama-4000 zifunyenwe. Kukholelwa ukuba uCe Acatl Topiltsinin wazalelwa kule ndawo. Ngenxa yobulumko bakhe obukhulu, wathiywa igama elithi Quetzalcoatl (inyoka eneentsiba). I-Quetzalcoatl yayilawula iTula, kwaye yanyamalala ngasempuma, ithembisa ukubuya. Idolophu yekamasipala waseTepoztlán. Apha uya kufumana inzolo phakathi kweentaba ezintle ezijikeleze idolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Maura Marino
UMaura Marino yi-Superhost
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1503